The Social Media Laghachi Na Investment Not Na-adịghị Atụ | Martech Zone
The Social Media laghachi na ntinye ego ị naghị atụ
Gwa eziokwu, ọtụtụ ụlọ ọrụ mụ na ha rụkọrọ ọrụ nwere nsogbu ịchụle na ịtụ nha laghachi azụmaahịa abia n’ihe gbasara soshal midia. E nwere ụzọ dị iche iche dị mkpa iji mepụta uru na mbọ mgbasa ozi nke nzukọ gị:
Kedu ihe ọnụ ahịa nke azụmahịa gị ga-efu gị na Pay Per Click? - Ebe ọ bụ na a na-ebipụta isiokwu na ụgwọ nke ịkwụ ụgwọ kwa Pịa, ị nwere ike dakọtara na isiokwu gị nchịkọta na-akwụ ụgwọ nke ịkwụ ụgwọ kwa Pịa maka otu okwu ahụ. Gbakwunye ọnụọgụ ma ị na-enwekarị akụkọ mara mma ịgwa nzukọ gị banyere ego ole ị zọpụtara ụlọ ọrụ ahụ.
Ego ole ka ị ga - eji kwuo na mgbasa ozi mmadụ? - ckingchọta ahịa ndị sitere na isi mmalite mgbasa ozi bụ ụzọ dị nchebe iji gosi na ịlaghachi na ntinye ego. N'ezie, nke a gụnyere na engines ọchụchọ - nke ga - ebugharị ọtụtụ ụlọ ọrụ gị na ụlọ ọrụ gị site na mgbasa ozi mmekọrịta.
Ọtụtụ ndị ahịa na ịntanetị na ndị ọkachamara na-elekọta mmadụ na-ahụ ụzọ. Mmetụta nke nloghachi na ntinye ego gafere kpamkpam pịa ndị ahụ. Otu n'ime David Armano si Eserese site na afọ gara aga bụ nke m gara n’ihu ịkekọrịta:
The mgbakwunye na nkwụghachi ego odighi mfe iji tụọ, mana ọ dị. Ozi m na ndị ahịa bụ na anyị nwere ike mmalite site na iji nloghachi azụ na ntinye ego na ụzọ abụọ mbụ - mana a ga-enwe ọtụtụ ụzọ ndị ọzọ ụlọ ọrụ gị ga-esi laghachi na ntinye ego ya na mgbasa ozi mmekọrịta.
Ghọ onye ndu echiche na ụlọ ọrụ gị - ọ bụrụ n’icheghị n’ahịa nwere ike ịbịa site na iwepụta aha gị na ụlọ ọrụ ahụ, ị ​​mejọrọ. Igodo nke mgbasa ozi mmekọrịta na-agbakwunye akụkụ mmadụ na akara n'ihi na ọ na-ewulite ntụkwasị obi. Tụkwasị obi bụ isi ihe na azụmaahịa 'ịga nke ọma. Ozugbo ịmalitere ikere òkè na mgbasa ozi mmekọrịta, a na-akpọkarị gị ka ị kwuo okwu na ụlọ ọrụ na nnọkọ ndị mmekọ, ihe omume, webinars, wdg.
Iwulite Mmekọrịta Nke Gị na Ndị Ahịa gị - o siri ike ịhapụ ndị anyị toro eto. Ndị mmadụ bụ mgbe ụfọdụ mama ị chọrọ na mmekọrịta mmekọrịta iji jide ndị ahịa. Ọ bụghị eziokwu na ọnụ ọgụgụ niile, ọtụtụ oge ọ bụ ntakịrị ntakịrị ndị mmadụ na-eme. Ọ bụ ndị ọrụ na - eme ka ọdịiche dị na mgbasa ozi na - enyere gị aka ịhụ n’azụ akara ahụ ma jikọọ ya na ndị mmadụ n’azụmahịa ahụ.
Okwu onu ahia - egosila na ọ bụ otu n'ime ụzọ kachasị dị irè nke azụmaahịa azụmaahịa, mana ọ bụghị ihe enwere ike ịmepụta ya (ọtụtụ ịnwale). Na mkparịta ụka nke mgbasa ozi mmekọrịta, ana m akwado ụlọ ọrụ, ngwaahịa na ọrụ mgbe ọ bụla m nwere ike. Nke a na - abụkarị omume na netwọkụ - rịọ maka enyemaka ma ọ bụ kwalite ọrụ ma ndị mmadụ gbasaa okwu ahụ!
Iwuli Repma - Nnabata bụ ihe niile n'ịntanetị, na iwepụta ezigbo aha na saịtị gị, na netwọkụ mmekọrịta gị, yana saịtị ndị ahịa gị yana netwọkụ mmekọrịta bụ ntọala nke ntụkwasị obi ga-eweta azụmahịa. Ntụkwasị obi dị mkpa na azụmaahịa azụmaahịa ọ bụla, ọ dịkwa mfe iji merie nsogbu ntụkwasị obi site na ijikọ onwe gị na ndị mmadụ n'azụ ụdị ahụ.
Ikike Iwu - yana iwulite aha gị, ị na-ewukwa akụkọ ihe mere eme na injin ọchụchọ nke a tụrụ ma n’amaokwu yana n’azụ azụ. Aha ahụ na-aga n'ihu, nke metụtara isiokwu na isiokwu dị mkpa, ga-aga n'ihu na-eme ka ọdịnaya ndị ịkekọrịta na saịtị ndị ị na-ede na elu nke nsonaazụ ọchụchọ engine. Chọọ bụ nnukwu isi mmalite azụmaahịa n'ịntanetị na itinye ego. Ekwela ka e duhie gị - ihe ịga nke ọma na mmekọrịta gị na mmekọrịta gị na ikike dị ukwuu nke ị na-eji engines ọchụchọ rụọ.
Ahịa na-enweghị isi - Ọtụtụ ndị na-eme nchọgharị na weebụ ga-agụ, hapụ, gụọ, hapụ, gụọ, hapụ, ma laghachi na itinye aka. Ọ bụrụ n ’ịgụ ya na blọọgụ mana ntughari ga-eme na saịtị ecommerce gị ma ọ bụ saịtị ụlọ ọrụ, oge ụfọdụ ọ gaghị ekwe omume web nchịkọta kwupụta na ị gaa na mgbasa ozi mmekọrịta. Eziokwu ahụ bụ na ọtụtụ n'ime anyị ejikọtara na mgbasa ozi mmekọrịta mana ị na-azụ m ahịa ozugbo na-ekwughị banyere blọọgụ m… mana ọ nọ ebe ahụ ma nwee mmetụta.
Ego Ego Ọrụ - Mgbe ndị ahịa gị na-agụ blọọgụ gị, ịnwere ike inwe mmetụta dị ịrịba ama na ọnụọgụ ọrụ yana njikwa njikwa akaụntụ site na ịkụziri ha ntanetị. Mgbasa mgbasa ozi na-abụkarị otu-na-ọtụtụ ọkara. Kama ide ozi email na nzaghachi ndị ahịa, ị nwere ike dee ya n'ịntanetị wee wepụta ya maka ndị mmadụ. O siri ike ịlele ọrụ ịkwesighi ịrụ - mana ọ bụ ebe ahụ!
Ọdịnaya na Izi ozi - ụbọchị ọ bụla ụlọ ọrụ gị na-ekere òkè na mgbasa ozi ọha na eze bụ ụbọchị nke ndị ọrụ gị na-amụta, na-eme nka nke ozi gị, ma na-akpọsa ya. Ka m kwuo okwu, nyocha, na blog banyere mgbasa ozi mmekọrịta na mmetụta ya na azụmaahịa, ọ dịịrị m mfe karị iji nyere atụmanya ọhụụ na ndị ahịa aka ịghọta otu esi eme ya. M na-ekere òkè na mkparịta ụka ahụ, na-agụ ihe ndị ọkachamara ndị ọzọ na-ekwu, na-ahụ ihe ịga nke ọma na nke dara, na ike itinye ya na ndị ahịa m. Enwere uru bara ụba na nke a mana ọ siri ike ịlele ROI.
Na-akwalite ego gị na Social Media
Ohere ndi ezubere iche na ọnụ ala dị ala na pịa mgbasa ozi mgbasa ozi na-eme ka ọ bụrụ usoro nkwalite pụrụ iche nke ị ga-eji. Y’oburu n’itinye oge gi n’iwu ndi na-ege nti ma obu ndi mmadu, kedu ihe kpatara na igaghi agha okpukpu abuo na ego gi ma gha hu na o ruru otutu ndi mmadu aka n’ime netwok. Ghara ikwu eziokwu na Facebook na nyiwe ndị ọzọ na-enye ntinye ka mma maka nkwalite akwụ ụgwọ na nhazi!
Ọ bụghị ihe niile ma ọ bụ ihe ọ bụla.
Expertsfọdụ ndị ọkachamara n'ime mmekọrịta mmekọrịta anaghị amata uru nke mgbasa ozi mmekọrịta ndị ọzọ na ịkparịta ụka n'socialntanet dị ka Twitter, LinkedIn, Facebook, wdg. Ha kwenyere na ị kwesịrị iji oge gị niile mee otu ihe. or nke ozo. Ọ na-amasị ha iji nyiwe nyiwe na usoro iji tụọ usoro ha dịka naanị onye imefu niile ihe onwunwe gị na nke ị ga-eji ihe ọ bụla na ndị ọzọ.
Ihe m hụtara na soshal midia bụ iji usoro nke ọ bụla iji kwalite ike ya ma zere adịghị ike ya. Twitter bụ ezigbo ụzọ iji rute ọtụtụ mmadụ na obere mbọ…. ma ọ bụghị usoro dị irè maka isiokwu (dị ka post a) nke chọrọ nkọwa zuru ezu banyere isiokwu. My blog bụ ihe zuru oke maka nkọwa zuru ezu. Ya mere - na nkeji ole na ole a tweet ga-akpaghị aka ga-gwa, via Hootsuite ihe karịrị 80,000 nke m onwe m na ọkachamara na-eso ụzọ… na-eduga ọtụtụ ndị ọbịa azụ m blog, ụfọdụ ịkekọrịta post, na nloghachi na ego ga-abụ nnọọ mma.
Tags: mgbasa ozi mgbasa oziọrụ ndị ahịa soshal midiamgbasa ozi mgbasa ozi na-alaghachi na ntinye egoelekọta mmadụ media roimgbasa ozi mgbasa ozimgbasa ozi mgbasa ozi na-elekọta mmadụ
Azụmaahịa gị ọ na-agbaso ụkpụrụ omume kacha mma nke Social Media?
Na-ebuli Spkwụ ụgwọ Webinar gị: Webinar ROI Calculator
Jun 7, 2009 na 9:43 AM
Echiche magburu onwe ya na ROI nke mgbasa ozi mmekọrịta.
Mgbasa mgbasa ozi bụ ngwakọta nke ọzụzụ sitere na Branding na PR na Marketing. Branding na PR bụ banyere ROI na-enweghị isi ebe Marketing na-ekwu maka ROI.
Mana mgbe a rụnyere ọrụ ndị a n'otu ụdị dịka mgbasa ozi mmekọrịta, ụlọ ọrụ ga-ebu ụzọ kọwaa ihe ha na-eji usoro mgbasa ozi eme tupu, tupu ha ekpebie ụdị ụdị ROI dị mkpa.